SKU: Dispenser-savony tsy misy Touch-2-2 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana fandroana sensor Tags: Deck Mounted, Motion Sensor, Saro-pofona tsy misy fotony
Faly be aho amin'ity dispenser savony mandeha ho azy ity. Te hanana fomba hanasana savony ny tanako aho nefa tsy mikasika na inona na inona ary mifanaraka amiko tsara.
Mahalana aho no manoratra famerenana fa nanapa-kevitra ny hanoratra an'ity aho satria miasa tanteraka ity disponseran'ny savony tsy misy fikitika ity. Amporisiho azo antoka izany ho an'ireo izay mitady dispenser savony tsy misy mikasika.
R *** f2021 / 04 / 23
Tena tianay mivady izany. Nahita fitarainana be dia be momba ny dispenser savony tsy misy mikasika aho. Ohatra, ny sensor dia tsy dia marefo loatra ary indraindray aza tsy misy valiny ary mitombo ny rano. Na izany aza, tsy mitranga eo amin'ity dispenser savony sensor ity mihitsy ireo tranga ireo.